बाल कथा – Page3– मझेरी डट कम
बुधवा सानैदेखि पढाइमा तेज थियो । स-साना कुरा पनि उसले निकै समयसम्म भुल्दैनथ्यो । उसको तीक्ष्ण बुद्धिका कारण थारू समुदायमा बस्ने उसका किसान बा आमा अौधी खुसी थिए । बुधवाको बाले आफ्ना श्रीमतीसँग भन्थे- हाम्रो पालामा ‘हलो, कोदालो चलाउँदै जुनी बित्यो । त्यसैले, पढ्ने वातावरण नै भएन, यो छोरालाई भने धेरै पढाउनु पर्छ है बुधेकी आमा ।’
बिनी आज निक्कै खुशी छ, खुसी हुनका लागि उसँग थुप्रै कारण छन् । एक त आज बिनीको जन्मदिन हो, त्यसमाथि बिनीका बाबुले छोरीको जन्मदिनका लागि, ‘ह्याप्पी बर्थडे बिनी’ लेखेको ठूलो केक घर ल्याइदिएका छन् ।
सुन्दर जङ्गलमा चारवटा चरा-चुरुङ्गीहरू आफ्नो नयाँ बासस्थानको रूपमा प्रयोग गर्न आइपुगे । जसमध्ये एउटा थिई जुली (जुरेली) । आफ्नो समूहमा अति राम्री र मधुर स्वरकी धनी । उनी गाउने नाच्ने गर्दै दिनहरू बिताउन थालिन् । उनी सौखिन प्रवृत्तिकी थिइन् ।
रमा अधिकारी 'कादम्बरी'
आकाश उमेरमा सानो छ तर ठूला मान्छे भन्दा पनि असल र ज्ञानी छ । घर, टोल, छरछिमेक र स्कुलमा ऊ अनुशासित बालकको नमूना बनेको छ । शिक्षक-शिक्षिका लगनशील विद्यार्थीको उदाहरण दिनुपरे आकाशलाई नै छान्छन् । स्कुलमा त आकाश मिहिनेत गरेर पढ्छ नै घरमा समेत अध्ययन गरिरहन्छ ।
एउटा दुर्गम पहाडी गाउँको कुरा हो । अनिलको घरबाट उसले पढ्ने स्कुल निकै टाढा पर्थ्यो । स्कुल जाँदा बाटामा एउटा ठूलो जङ्गल थियो । हुन त गाउँको बाटाबाट पनि घुमेर स्कुल पुगिन्थ्यो तर त्यो बाटो धेरै लामो र घुमाउरो थियो ।
‘रुखले वातावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्नमा मद्दत गर्छ । बाढीपहिरो रोक्छ र मानिसलाई नभइनहुने अक्सिजन प्रदान गर्छ । त्यसैले रुख मानिसका लागि धेरै गुणी वनस्पति हो । रुखलाई काट्यो भने उसलाई पनि मानिसलाई जस्तै दुख्छ ।’
”आगो लाग्यो ! आगो लाग्यो !!”
अचानक मेरो कानमा मानिसहरूले चिच्याएको, कराएको, हल्ला गरेको आवाज पर्‍यो । म र दिदी भर्खर स्कुलबाट आएर टुसुक्क मात्र के बसेका थियौं – टोलमा त आगो लागेको हल्लाले उत्पात मच्चाउन थालिहाल्यो ।
साँझको समय थियो । डुब्न लागेका सूर्यका किरण पहाडका टुप्पामा रातो भएर फैलिएका थिए । चिसो हावाको सिरसिरले जङ्गल नै आनन्दमय र रमाइलो बनेको थियो । यस्तो बेलामा जसलाई पनि खुला हावामा घुम्न मन लाग्नु स्वाभाविकै हो । आ-आफ्ना गुँडहरूमा र घरमा बसिरहेका पशुहरू र चराहरू पनि विस्तारै बाहिर निस्केर जङ्गलमा यताउता घुम्न थालेका थिए ।
मुना २०६७ मंसिर
“के गर्नु छोरी ! हाम्रो धारामा पानी नै आएन । अब भात पकाउन पनि पानी छैन । भाँडा माझ्न पनि पानी छैन ।” रित्तै गाग्रो बोकेर धाराबाट फत्फताउँदै गीताकी आमा फर्किन् ।
आमाको दुःख देख्न सक्दिनथी गीता । घरमा दिनहुँ जसो पानीको समस्या परिरहन्थ्यो । नेपाल पानीको दोस्रो धनी देश हो भनेर गीताले पढेकी पनि थिइन् तर उनलाई त्यो कुरामा कत्ति पनि विश्वास लाग्दैनथ्यो । गीताको टोलभरि पानीको दुःख थियो । धारामा पनि ठूलो लाइन लागेको हुन्थ्यो । पानीको समस्या टोलबाटै समाधान गर्न पाए गीता खुसी हुन्थी होला ।